निर्देशक Stanislav Govorukhin: सर्वश्रेष्ठ चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
Stanislav Govorukhin - निर्देशक, जो आफ्नो जीवन समयमा क्लासिक रूसी सिनेमा को शीर्षक सम्मानित गरिएको थियो। यसको 79 वर्ष मा, मास्टर जो एक bombshell उत्पादन चित्र, लिन जारी छ। सबै चलचित्रहरू विधा बिना मास्टर व्यवस्थापन, उहाँले नै रोमाञ्चक हास्य कथा, कार्य, melodrama गर्न सक्षम छ। प्रशंसक, विगतमा र वर्तमान निर्देशक बारेमा थप जान्न तिनीहरूलाई हटाइएको टेप सम्झना गर्न इच्छुक हुनेछन्।
Stanislav Govorukhin: जीवनी तारा
निर्देशक को जन्म ठाउ को पर्म क्षेत्रमा एउटा सानो गाउँमा, जन्म वर्ष छ - 1936. Stanislav Govorukhin आनन्दित बाल्यकाल, आफ्नो जन्म पछि केही वर्ष देखि युद्ध सुरु के सिक्न मौका अस्वीकार गरियो। पनि यसको पूरा भएपछि एक आमा, एक पोशाक, एक छोरा र एक छोरी मिलेर पैसा तर्साउने परिवारको अभाव। Maitre बुबाले शिविरमा आफ्नो छोरा को जन्म पछि दुई वर्ष, केटा यो सम्झना छैन मा मृत्यु भयो।
एक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त Stanislav Govorukhin को भू-विभाग ध्यान, कजान विश्वविद्यालय को एक विद्यार्थी भयो। उहाँले एक उपाधि प्राप्त, तर यो कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएन। रचनात्मक गतिविधि लागि propensity उहाँलाई कजान टिभी स्टूडियो, समय रूस मा केही मध्ये एक मा पूर्व मा काम प्राप्त गर्न पुगे। उहाँले आफ्नो क्यारियर राजधानी सार्न र निर्देशन विभाग पूरा निर्णय लागि रूपमा, वर्ष मात्र एक जोडी को लागि त्यहाँ labored। प्रतिभाशाली मान्छे सजिलै VGIK को विद्यार्थीहरूको संख्या मा सामेल भए।
निर्देशक को पहिलो फिल्म
यसलाई आफ्नो पहिलो चित्रकला Stanislav Govorukhin को थियोसिस रूपमा सिर्जना कि रोचक छ। यो आरोहीहरूको भारी तालिका बारेमा बताउँछ जो साहसिक विधा, पर्छ जो फिलिम "ठाडो", थियो। नेतृत्व भूमिका लागि अभिनेता को विकल्प निर्देशकमा कठिनाइ कारण छैन, उहाँले यो कार्य Vladimiru Vysotskomu सुम्पनुभयो। खैर, यो फिलिम, 1966 मा जारी गरेपछि दर्शक प्रेम अन्तिम गीत संग परे।
1969 मा, Stanislav Govorukhin एक ऐतिहासिक फिलिम परियोजना "सेतो विस्फोट" सिर्जना। कार्य सोभियत Mountaineers, तिनीहरूको साहस र साहसिक कार्य गर्न कहानी समर्पित छ, युद्ध वर्ष समयमा ठाँउ लिन्छ। यो समय मा मुख्य भूमिका Armen Dzhigarkhanyan पाए। केही मानिसहरू हेलिकप्टर जसमा उहाँले दुर्घटनाग्रस्त उडान थियो जब शूटिंग लगभग Maitre जीवन खर्च भनेर थाह छ।
"जीवन र रबिन्सन Crusoe को अनौठो अचम्मको साहसिक" - सधैं सबै भन्दा राम्रो परियोजनाहरू Stanislav Govorukhin द्वारा सिर्जना बीच उल्लेख गरिएको छ जो 1972 को एक तस्वीर। चलचित्र साहसिक विधा देखि कार्ड विजार्ड कल एक प्रकारको भएको छ। राम्रो कथा को मुख्य भूमिका बच्चाहरु र युवा दर्शक मा मुख्य केन्द्रित, लियोनिद Kuravlev तारा अङ्कित।
"बैठक स्थान परिवर्तन गर्न सकिँदैन" - निर्देशक Stanislav Govorukhin 1979 मा दर्शक जो बारे फिल्म। प्लट द्वारा लिखित "दया को युग" को काम देखि लिइएको छ भाइहरूलाई Weiner। तथापि, मास्टर पूर्ण अन्त्य परिवर्तन, विवरण को धेरै reworked। फिल्म ठूलो अनुनाद थियो, साथै "दस साना इंडियन्स", मोहित बच्चाहरु र वयस्क दुवै painting एक वर्ष पछि प्रकाशित।
"त्यसैले तपाईं बाँच्न सक्छ" - Stanislav Govorukhin लिए कि saddest टेप को एक। चलचित्रहरू निर्देशक अक्सर अध्ययन एक प्रकारको बन्न, जो को वस्तु आधुनिक समाज हो। यो वृत्तचित्र नाटक, जित्यो छ जो तीन "Nicky" मा, यो सबै भन्दा स्पष्ट नै प्रकट गर्नुभयो। उही सन्देश केही वर्ष पछि जारी भएको थियो जुन एक "Voroshilov Sharpshooter", वहन।
अन्तमा, निर्देशक सबैभन्दा उल्लेखनीय काम फिलिम उल्लेख गर्नुपर्छ बीच 2003 मा देखाइएको, "स्त्रीले आशिष् दिनुहुन्छ।" यो प्रकोप दुई प्रेमीहरूको को ऐतिहासिक जीवन नष्ट सक्छ कसरी को कथा छ।
पहिलो पत्नी अभिनेत्री जूनो निर्देशक Karaev, उहाँले चाँडै छोडपत्र जसलाई थियो। यो विवाह देखि 2011 मा एक स्ट्रोक को मरेका मास्टर छोरा थिए। सम्पादक Galina - महिला, धेरै वर्ष को लागि विवाह जो Stanislav Govorukhin। व्यक्तिगत जीवन निर्देशक, हुनत यो एकदम जीवंत रहनेछ।
धेरै वर्ष पहिले, मास्टर पनि आफ्नो पत्नी छोडपत्र जाँदै, Svetlana Khodchenkova यसको सम्बन्ध लुकाउन थिएन, तर चाँडै तल cooled। अर्को सरस्वती प्रतिभा अभिनेत्री अन्ना Gorshkov, आफ्नो चित्रहरु मध्ये खेलेका थिए। उहाँले चाँडै parted कोसँग, Elena Dudin बदलिएको थियो। पत्नी Govorukhin अन्धो, आफ्नो क्षणिक romances गर्न आँखा पतिको प्रेरणा को आवश्यकता थियो भनेर थाह पाउँदा।
धेरै समय लाग्छ कि राजनीतिक गतिविधि भए तापनि निर्देशक समय समयमा नयाँ फिलिम परियोजनाहरू विज्ञप्ति। त्यसैले, प्रशंसक नयाँ कृति, को विजार्ड द्वारा सिर्जना लागि आशा गुमाउनु हुँदैन।
यो श्रृंखला "छ पाइतालामुनि": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,
Fedor Dobronravov: अभिनेता-हास्य अभिनेता को जीवनी
मसीही Hager: जीवनी र अभिनय क्यारियर
प्लट, र अभिनेता, को भूमिका को वर्णन "श्री र श्रीमती स्मिथ।" फिल्म "श्री र श्रीमती स्मिथ (श्री र श्रीमती स्मिथ)"
नतालिया Oreiro। अभिनेत्री र गायक को जीवनी
को "गोल्ड रश को सबैभन्दा पुरानो। अलास्का "
आधुनिक प्याकेज ट्रांसफर्मर substations प्रयोग
कलेजो आवारागर्दी ~ र यसको तयारी विभिन्न व्यञ्जनहरु
वारखोरी: शहर को दर्शनीयकरण। वारखोरीरी को मन्दिर
मिश्रण "Similac": लाभ, बेफाइदा र उत्पादनहरु
संसारको सबैभन्दा महंगा घडी 10 माथि। सबैभन्दा महंगा घडी कसले हो?
रूपमा महिला प्रभावकारी वजन बढाउनका? वजन लागि आहार केटी
लियो गर्न उपयुक्त के पत्थर छ? साँच्चै शाही talismans
कि बारे के देश पहिलो आलु बढ्न थाले
गिनी सुँगुरहरु प्रकार: आफ्नो मित्र छनोट
मिनी होटल मास्को सेवा विभिन्न स्तर प्रदान गर्दछ
क्यालिफोर्नियाली खरायो - सबै भन्दा राम्रो विकल्प प्रजनन लागि
GTA5कसरी प्राप्त गर्ने 100 प्रतिशत: सुझावहरू